I-China ICE Industrial Reverse Osmosis System Yomkhiqizi Nomphakeli Wezixhobo Zokupholisa Tower Tower Yubing
Kuyini i-Reverse Osmosis?
Amanzi adlula kulwelwesi lwe-RO abizwa nge- "permeate" futhi usawoti oncibilikile owenqatshwa ulwelwesi lwe-RO ubizwa nge- "concentrate". Uhlelo oluqhutshwa kahle lwe-RO lungasusa kuze kufike ku-99.5% kasawoti oncibilikisiwe ongenayo nokungcola.
Inqubo Yezokwelashwa Kwe-Industrial Reverse Osmosis RO
Isitshalo se-Industrial reverse osmosis sifaka phakathi isihlungi se-multimedia, isithambisi samanzi noma ama-anti-scalants dosing system, i-de-chlorination dosing system, i-reverse osmosis unit enezinambuzane ezingenakudlula, kanye ne-UV sterilizer noma i-post chlorination njenge-post treatment. Le mishini ye-RO isebenzisa ubuchwepheshe be-reverse osmosis ngokuhambisa amanzi okuphakelayo ngesihlungi se-multimedia pre-ukususa izinhlayiyana ezinkulu kune-10-micron. Ngemuva kwalokho amanzi ajovwa yikhemikhali elwa nezikali zokulawula ukungcoliswa kobulukhuni okungadala ukulimala kulwelwesi lomshini we-RO. Lezi zinketho zokwelashwa kusengaphambili zinamandla okususa ubulukhuni, i-chlorine, iphunga, umbala, i-iron, nesibabule. Amanzi abe eseqhubeka engena ku-reverse osmosis unit lapho ipompo elinengcindezi ephezulu lisebenzisa ingcindezi eyedlulele kusisombululo esigxile kakhulu, kwehlukanisa usawoti osele, amaminerali kanye nokungcola isihlungi sangaphambilini esingakwazi ukukuthola. Amanzi amasha, aphuzwayo aphuma ekugcineni kwengcindezi ephansi kolwelwesi ngenkathi usawoti, amaminerali nokunye ukungcola kukhishelwa emseleni kolunye uhlangothi. Okokugcina, amanzi adluliswa nge-UV sterilizer (noma i-post chlorination) ukubulala noma yimaphi amabhaktheriya namagciwane asekhona emanzini.
Umhlahlandlela Wokuthenga We-Industrial Reverse Osmosis
Ukuze ukhethe umkhiqizo we-RO olungile, imininingwane elandelayo kufanele inikezwe:
Izinga lokugeleza (GPD, m3 / usuku, njll.)
I-2Feed water TDS nokuhlaziywa kwamanzi: lolu lwazi lubalulekile ukuvimbela ulwelwesi ekungcoliseni, futhi lusisize sikhethe ukwelashwa kwangaphambi okulungile.
I-Iron ne-manganese kufanele zisuswe ngaphambi kokuthi amanzi angene ku-reverse osmosis unit
I-4.TSS kufanele isuswe ngaphambi kokungena ohlelweni lwe-Industrial RO
I-SDI kufanele ibe ngaphansi kuka-3
6.Amanzi kufanele angabi nawo uwoyela negrisi
7. I-chlorine kufanele isuswe
Amandla kagesi atholakalayo, isigaba, kanye nemvamisa (208, 460, 380, 415V)
Ubukhulu bendawo ebekiwe lapho kuzofakwa khona i-Industrial RO System
Langaphambilini Uhlelo lwe-ICE High Efficiency Sand Filtration System Lwe-Cooling Towers 'Circulation Water Treatment
Olandelayo: Uhlelo lwe-ICE Industrial Water Softener for Cooling Tower Source Water
Izinsiza kusebenza ze-Industrial Reverse Osmosis
Isihlungi samanzi se-Industrial RO
yezimboni RO uhlelo lokuhlanzwa kwamanzi
Industrial RO ukwelashwa uhlelo
Izinsimbi ze-RO zokwelashwa kwamanzi
Uhlelo lwe-RO lokupholisa uhlelo lwamanzi lombhoshongo
Isihlanzisi samanzi sombhoshongo wokupholisa
Ukwelashwa kwamanzi kwe-RO ngenqubo yokupholisa
ICE MBR ulwelwesi Module of Industrial Wastewate ...